I-Boutique ecotourism (Ama-bungalows phakathi kolwandle ne-lagoon)
Indawo enhle kakhulu yokuphumula futhi uchithe iholide elivuselelayo. Izivakashi ziyibize ngokuthi i-Villa Paraíso ngenxa yesipiliyoni esihlala izinsuku ezimbalwa kule ndawo.
I-bungalow iyimfihlo, inemibhede emi-2 ephindwe kabili, ikhabethe kanye negumbi lokugezela eligcwele.
Ezindaweni ezivamile inendawo yokubhukuda, indawo yokupaka yangasese, ama-palapas angu-3 anetafula, izihlalo nezihlalo zokuphumula.
Le ndawo isendaweni ekhetheke kakhulu kwazise ngakolunye uhlangothi kunolwandle olunobhishi kanti ngakolunye ichweba. Kudliwa kusanda kumnandi futhi kumnandi.
Kuhle ukwabelana ngezinsuku ezimbalwa nomndeni noma abangani. Le ndawo itholakala phakathi kwe-lagoon nolwandle endaweni yokucima ukoma, inezindawo ezihlaba umxhwele, ivuka izingoma zezinyoni, ukudla okumnandi endaweni, ngaphambi kokulala bheka umbono omuhle wezinkanyezi futhi uzilalele umsindo we amagagasi olwandle, endaweni, indawo yokupaka eyanele, ichibi elihle, i-bungalow enemibhede emibili enegumbi lokugezela langasese kanye nekhabethe.
Indawo lapho unqamula khona ukuxhumana.
Angikho emagcekeni, nokho ngibheke noma yisiphi isicelo abangase sibe naso. Umphathi uhlala kumamitha ambalwa ukusuka kule ndawo, ngakho sihlala sitholakala ukuze senze ukuhlala kwezivakashi zethu kube mnandi
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$234.